Global Voices teny Malagasy » Ny fiteny rehetra eto amin’izao tontolo izao: fampahafantarana ny Wikitongues · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jolay 2019 8:41 GMT 1	 · Mpanoratra DB Udell Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Dika, Hafanam-po, Mediam-bahoaka, vondrom-piarahamonina, Blaogim-Piarahamonina GV, firavoravoana
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Febroary 2016)
Hetsika ho an'ny zon'olombelona ny Wikitongues  . Manorina ny arsivan'ny kolontsaina iombonana mbola tsy fahita hatramin'izay izahay miaraka amin'ireo mpandaha-teny sy mpampiasa ny fiteny rehetra eto amin'izao tontolo izao ary manaitra ny saina amin'ny fahasamihafan'ny fiteny ary mihetsika mba hiaro izany.
Fikambanana tsy mitady tombontsoa sady vondrom-piarahamonina mpilatsaka an-tsitrapo manerana izao tontolo izao izahay, izay natomboko ary nampiako tamin'ny famolavolana miorina indrindra amin'ny traikefako amin'ny maha-mpikambana ahy ato amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices efa hatry ny ela. Hatramin'ny nanombohan'ny Wikitongues dia efa nandrakitra tantara am-bava maherin'ny 300 izahay tamin'ny fiteny tsy manam-paharoa mihoatra ny 180 , miasa tsikelikely kanefa azo antoka kosa fa mizotra mankany amin'ny tanjonay amin'ny fitantarana sy ny fizarana ny fitenindrazan'olombelona miisa 7000.
Fomba iray ahafahana mahafantara ny kolontsaina hafa anefa ny fijerena ny lahatsarin'ireo mpandahateny sy ireo mpampiasa ny fiteny, rangodrangotra kely fotsiny ihany anefa izany . Te-handroso lalindalina kokoa izahay hanao fanentanana momba ny fiteny miisa 7.000 amin'ny alalan'ny fanampiana ny olona hianatra azy rehetra ireo. Izany no mahatonga anay hanangana ny Poly  : open-source (tovozina malalaka), rindrambaiko maoderina izay manamora ho an'ny olona rehetra hizara ny fitenin'izy ireo amin'ny alàlan'ny famoronana rakibolana fandikan-teny mampiasa lahatsoratra sy lahatsary.
Ho fitaovana sarobidy ho an'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Wikitongues ny Poly; fomba iray vaovao, haingana ahafahana mahafantatra lalindalina kokoa ary manokatra ny varavarana mankany amin'ny fidirana lalindalina kokoa momba ny olona iray sy ny fitenin'ny vondrom-piarahamoniny. Ankoatra izany, fitaovana manan-danja ho an'ny vondrom-piarahamonina miisa 3.000 maneran-tany izay miatrika fanamby  amin'ny fiarovana ny fitenin'izy ireo ny Poly.
Nizara tantara momba ny fitenin'ny vondrom-piarahamonina samihafa manerana izao tontolo izao aho tao anatin'ny herinandro roa, tantara mikasika ny antony mahatonga anay hanao ny Poly.
Raha tianao ny Wikitongues ary atokisanao ny asanay dia miangavy anao mba hanolotra fanomezana  ho anay ao amin'ny Kickstarter . Tsy afaka manohy izahay raha tsy misy ny fanohananareo, ary manan-danja ny dolara tsirairay.
Misaotra, gràcies, faleminderit, አመሰግናለሁ, + 7.000 hafa 🙂
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/04/140969/
 fiteny tsy manam-paharoa mihoatra ny 180: http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FWikiTongues&t=YzEzM2M1MGE0ZGI2MDA4YTc4MjY2YzRlMTk4YjNiMDNkMTU1ZGJmZCxVTURPQW5nTA%3D%3D
 hanangana ny Poly: http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.kickstarter.com%2Fprojects%2Fwikitongues%2Fpoly-share-and-learn-every-language-in-the-world&t=YzExZDUwNTYwMzg5MGQ4NjNjYzRlMmViMjUyNWQyYWNiMmFiZTY0NyxVTURPQW5nTA%3D%3D
 miatrika fanamby: http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Fwade_davis_on_endangered_cultures%3Flanguage%3Den&t=MmNiMGQ3YWM4ODM2OGQxMWIwMjk2MzMxY2U4YjEzYzM0NzUxNGM5MyxVTURPQW5nTA%3D%3D